Tigiraayitti dargaggeessi tokko poolisiin ajjeefame – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsTigiraayitti dargaggeessi tokko poolisiin ajjeefame
(bbcafaanoromoo)–Naannnoo Tigiraayitti yeroo muddamaa sababa koronaavaayirasiitiif torban darbe labsame hojiirra oolchuuf tarkaanfii fudhatamaa wayita jirutti, walitti bu’insa uumameen dargaggeessi tokko poolisiin ajjeefamuun barame.
Ajjeechaan kun kan raawwatame naannoo Tigiraay aanaa Na’ideer Addeeti keessati ta’uu isaa ajajaan poolisii bakka sanaa Inispekter Yamaanee Kidaanemaayiraam BBC’f mirkaneessaniiru.
Ajjeechaan dargaggeesa kanaa kan qaqqabe Sanbata darbe ALI Bitootessa 19, 2012 Aanaa Na’ideer Addeeti jedhamtu keessa ganda Jiraatti. Sababiin ajjeefamuu dargaggoo kanaa ammoo poolisiin namoota mana dhugaatii turan akka bittinaa’an wayita gochaa turetti walitti bu’insa uumameen akka ta’e ibsameera.
Dargaggeessi ajjeefamee, maqaansaa Haagoos Nigusee kan jedhamu yoo ta’u, rasaasa miseensa poolisii tokko irraa itti dhukaafameen battalumatti lubbuun isaa darbuu sab-qunnamtiin waajira aanichaa ibseera.
Ajjeechaa dargaggeessa kanaa waliin walqabatee miseensi poolisii shakkames to’annoo jala oolfamee qorannoon taasifamaa jiraachuu ajajaan poolisii bakka sanaa mirkaneessaniiru.
Koronaavaayirasii: Mootummaan Naannoo Tigraay weerara dhibee Covid-19 ittisuuf labsii yeroo muddamaa labse
Bulchaan Naannoo Tigraay har’a yeroo ibsa kennan aguuggii afaanii godhatanii mul’ataniiru
Mootummaan Naannoo Tigraay weerara koronaavaayirasii ittisuuf labsii yeroo muddamaa labse.
Labsii yeroo muddamaa weerara dhibee Koronaavaayiras ittisuuf labsame kuni torbeewwan lamaaf tura jedhameera. Naannichatti hanga yoonaa namni dhukkuba kanaan qabame jiraachuun isaa hin beekamu. Qondaaltonni namonni 16 qoratamnii bilisa ta’u isaanii garuu ibsaniiru.
Mootummaan Itoophiyaa daangaa biyyootaa cufuu, manneen barnootaa cufuu, hojjettonni manaa akka hojjetan gochuu dabalate kaanillee murtesseera. Murteen Naannoon Tigraay murteesse naannicha keessa sochii taasifamurratti malee imala gara naannichaatti taasifamu irratti waan murtaa’e hin jiru. Naannolee sagal Itoophiyaa keessa jiran keessaa kan labsii muddamaa labse Tigraay qofaadha.
Magaalaadhaa magaalatti akkasumas imala magaalaafi baadiyyaatti ni dhaabbata. Akkasumas giddugaloonni gabaa ummanni baay’inaan keessatti walgahu labsii kanaan dhorkameera.
Akkasumas cidhiifi taskaarri akka dhaabatu murtaa’u pirezidantiin itti -aanaa naannichaa Dr Dabrastiyoon himaniiru. Labsiin kuni torban lamaaf kan turu ta’us barbaachisummaa isaa irratti hundaa’e dheerachuu danda’a jedhameera. Labsiin kuni heera nananichaa fooyya’e keewwata 93 fi 103 bu’uura godhachuuni jedhaniiru qondaaltonni. Itoophiyaa keessatti namoonni dhukkuba koronaavaayirasiin qabamani 12 yeroo ta’an kanneen keessaa 4 bayyanataniiru.
Haa ta’u malee, namni du’e hin jiru. Ta’us, ummanni haala eegamun qajeelfamoota hojiirra oolchaa akka hin jirre taajjabuu isaanii Pirezidantiin Itoophiyaa ibsanii turan.
Ethiopia: ዘ-ሐበሻ የዕለቱ ዜና | Zehabesha Daily News March 29, 2020
Trudeau continues self-isolating after his wife’s recovery from COVID-19